sosegado : ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ငါ့ရဲ့မှတ်စု (စတုတ္ထပိုင်း)
ကျမ ဒီနေရာမှာ စောင့်နေတာ မိနစ်၂၀ ရှိသွားပြီဖြစ်သည်၊ ရဲလင်းအောင်က အေးအေးဆေးဆေး ပြောစရာရှိသည်ဆို၍ ကျမလာနေကြဆိုင်လေးကို ချိန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရဲလင်းအောင်က အဲဒီနေရာတွေကို ငါမလာချင်ဘူး ဟုဆိုသည်၊ ကျမက ညနေပိုင်းမှာ ငါအလုပ်နှင့် အဲဒီဘက်မှာရောက်နေမှာ နင်ပြောတဲ့ အချိန်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောလို့ရတာက အဲဒီနေရာအကောင်းဆုံးပဲ၊ ကျမပေးသည့်အကြောင်းပြချက်ကို လက်ခံကာ အေးငါလာခဲ့မယ်ဆိုသည်။
တကယ်တော့ S Bar & Cafe ဆိုင်လေးကို ညနေရုံးဆင်းချိန်တွေမှာ ကျမ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီခန့်ဝင်ထိုင်ပြီး စိတ်အပန်းဖြေနေကြ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြိုက်သည်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မူ့ကိုကြိုက်သည်၊ ဆိုင်လေးရဲ့ Toffee Pudding, sparkling apple juice နှင့် ကော်ဖီပြင်းအေး တို့ကို ကျမကြိုက်နှစ်သက်၍လည်းဖြစ်သည်၊ One Fullerton တွင်ရှိပြီး စင်္ကာပူ မြစ်နှင့် မရီနာရှုခင်း တွေကိုကြည့်၍ တွေးချင်ရာတွေးနိုင်သည်၊ ည ၇ နာရီထိ ဈေးလျှော့ယူသည်၊ လူတွေများမလာခင် ကျမပြန်နေကြဖြစ်သည်၊ ယခုလည်း ရဲလင်းအောင်ကို စောင့်ရင်း မရီနာ ရှုခင်းတွေကြား ကျမစိတ်တို့သည် အတိတ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်။
…………………………………………… ။ …………………………………………………
စင်္ကာပူကို ကျမရောက်လာခြင်းသည် ကျမအတွက်ထွေထွေထူးထူး မဟုတ်၊ သျှောင်နောက် ဆံထုံးပါ၊ လင်အလုပ်လုပ်သည့်နေရာ အခြေအနေပေး၍ မယားပါလာခြင်းဖြစ်သည်၊ အဲဒီအချိန်အခါက ရဲလင်းအောင်က သူငယ်ချင်းကောင်းမူ့EP (employment pass) ကျပြီးမှ ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျမလဲ dependent pass ရရှိခဲ့သည်။
ရဲလင်းအောင် သူငယ်ချင်းတွေ စီစဉ်ပေး၍ ရောက်ရောက်ချင်း ကလင်မန်တီက မိသားစုအိမ်တစ်အိမ်တွင် ကျမတို့ အခန်းတစ်ခန်း ငှါးပြီးနေရသည်၊ နှစ်ပတ်လောက် အင်မင်ဂရေးရှင်း ကိစ္စတွေ လိုက်လုပ်ပြီး၊ ရဲလင်းအောင် အလုပ်စဆင်းရသည်၊ ကျမကတော့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲတွင် စာဖတ် ကဗျာရေးရင်း ရဲလင်းအောင်အပြန်ကိုစောင့်ရင်း အချိန်တွေကုန်ခဲ့သည်၊ အိမ်ရှင်က ကျမတို့ကို ထမင်းချက်ခွင့်မပေး၊ အဝတ်လျှော်စက် တစ်ပတ် နှစ်ခါသုံးခွင့်ပြုသည်၊ ဖုန်းလာရင်တော့ ခေါ်ပေးသည်၊ ကျမကလည်း နားလည်ပါသည် ကိုယ်ကအခန်းပဲငှါးထားတာကိုး၊ ရဲလင်းအောင်၏ အလုပ်သဘောအရ တစ်ပတ်တွင် အဝတ်လျှော်စက် သုံးခါသုံးခွင့်တိုးတောင်းလိုက်သည်၊ ရဲလင်းအောင် ပုံမှန်ပြန်ရောက်သော နေ့တွေမှာ လင်မယားနှစ်ယောက် ထမင်း အတူတူ စားရသည်၊ နောက်ကျသောနေ့တွေမှာ ကျမတစ်ယောက်ထဲ စားဖြစ်သည်၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွင်နေဘူးသော ကျမအတွက် စင်္ကာပူသည် ဘာမှမဆန်းပေ၊ ရဲလင်းအောင် overtime ဆင်းရသော နေ့တွေများလာသည်။
ရဲလင်းအောင်၏ အလုပ်က Service အင်ဂျင်နီယာဟုဆိုသည်၊ သင်္ဘော ပေါ်တွင် လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်သော စက်များကို လိုက်စစ်၊ လိုက်ပြင်ရခြင်းဖြစ်သည်၊ သင်္ဘောသား မလုပ်ချင်သော သူတစ်ယောက်ခုတော့ သင်္ဘောနဲ့ နပမ်းလုံးနေရပြီ။
ဪ ရဲလင်းရယ် နင်ရတာလဲ ကြည့်ဦးလေ တစ်လ သုံးထောင်ကျော်၊
ဒီလိုနဲ့ ကျမ ပလာစတာ ကပ်ပေး၊ ဦးစိုင်းလိမ်းဆေး လူးပေးနှင့် အခန်းလေးကတော့ ဆေးနံ့တွေသင်းလို့ပေါ့။
ရဲလင်းအောင်၏ boiler suit သုံးထည်ကို ထည်လဲဝတ်နိုင်အောင် လျှော်ပေးရင်း၊ စာကြည့်တိုက်က စာအုတ်တွေ ငှားဖတ်ရင်း ကျမအချိန်ကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ စဉ်းစားနေမိသည်၊
‘ရဲလင်းအောင်က၊ မ နင်အဆင်ပြေရဲ့လား၊’
ကျမကလည်း ‘နင်အလုပ်ထဲမှာ အဆင်ပြေအောင်နေ၊ ငါက ရပါတယ်၊’
အိမ်မှာနေတာများရင်း အိမ်ရှင်အမကြီးနဲ့ ရင်းနီးလာသည်၊ အိမ်ရှင်အမကြီးနာမည်က မြင့်မြင့်အေး ဖြစ်ပြီး၊ ကျမက မမြင့်ဟုခေါ်သည်၊ မမြင့်ဆီက ကျမလေ့လာစရာတွေ အများကြီးရသည်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး တော်တော်လုပ်သည်၊ ကျမအကြိုက်တွေ့စေသည်၊ အိမ်အလုပ် ကလေးအလုပ်တွေကြားက Watsons တွင် part time ဝင်လုပ်လိုက်သေးသည်၊ ကျမကိုလည်း ဝင်လုပ်ရန်ပြောသည်၊ ရဲလင်းအောင်နှင့် တိုင်ပင်ကြည့်ရာ မလုပ်ရဘူးဟုဆိုသဖြင့် ကျမ မလုပ်မိချေ။
ရဲလင်းအောင်တို့အလုပ်တွင် မြန်မာ အလုပ်သမားနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ များပါသည်၊ ထိုအတွက် အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း၊ ညစ်ခြင်း၊ အတို့အထောင် office politic လုပ်ခြင်း၊ စသဖြင့် မြန်မာ၊မြန်မာချင်းဖြစ်ကြသည်၊ ကြီးကြပ်သူ မြန်မာနှစ်ယောက်ကလဲ သူ့လူ၊ ကိုယ့်လူ လုပ်လာသည်၊ ခက်ခဲသော၊ အန္တရာယ်ရှိသော အလုပ်ဆိုရင် သူတို့မကြိုက်သူများကို လွတ်သည်၊ လွယ်ကူသော၊ oversea သွားရသော၊ overtime ပိုရသော အလုပ်ဆို၊ သူတို့ကိုဖါးသော သူတို့လူများကိုသာလွတ်သည်၊ သူဌေးတွေကလည်း အလုပ်ပြီးရင် ပြီးရော၊ မြန်မာ၊မြန်မာချင်းလွတ်ထားသည်။
ရဲလင်းအောင်မပြောနဲ့ ကျမတောင်မှ ထိုအသိုင်းအဝိုင်းကို စိတ်ပျက်မိသည်၊ အလှူပွဲ မွေးနေ့ပွဲတွေလုပ်ရင် လူရွေးဖိတ်သည်၊ မလာပြန်ရင် တစ်မျိုးထင်သည်၊ ဟိုဘက်ကလိုလို၊ ဒီဘက်လိုလို နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းရှိသော ဒီအသိုင်းအဝိုင်းလေး ဘာဖြစ်နေပါလိမ့်၊ ပြိုင်စရာမရှိ ပြိုင်နေကြသည်၊ တရားပွဲလာတာတောင် စိန်ဘယက်၊ စိန်လက်ကောက်၊ ရွှေတဝင်းဝင်းနဲ့၊ ဘုန်းကြီးနှင့် ဘယ်လိုရင်းနီးကြောင်းလဲပြချင်သေးသည်၊ တရားပွဲတွင် ကျမတကယ် တရားရမိသည်၊ တော်သေးတာပေါ့ စင်္ကာပူမှာမို့လို့ ဘေးနိုင်ငံတွေမှာဆို လူပါပျောက်ပြီ၊ မမြင့်ပြောပြမှ စင်္ကာပူရောက် ရွှေမြန်မာ များအကြောင်းပိုသိလာရသည်။
ရဲလင်းအောင်ကို အားပေးရင်း ကျမ စီမံခန့်ခွဲရေး ဒီပလိုမာ သင်တန်းတစ်ခုတက်ဖြစ်သည်၊ တစ်ဘက်မှလည်း ရဲလင်းအောင်ကို သင်တန်းတစ်ချို့တက်ဘို့ တိုက်တွန်းရသည်၊ ဒီနိုင်ငံမှာနေရင် ဒီနိုင်ငံနှင့်အတူ လိုက်နိုင်မှ အထူးသဖြင့်ပြောင်းလဲမြန်သော စင်္ကာပူ တွင် နောက်မကျန်ရစ်ခဲ့ဘို့ အရေးကြီးသည်၊ ရဲလင်းအောင်သည် သူ့အလုပ်ကိုသူ မကျေနပ်လာသည်၊ ရဲလင်းအောင်၏ အခြေအနေ စင်္ကာပူ၏ လုပ်ငန်းသဘောအရ ဒီအလုပ်တွင်ခုလောလောဆယ် တည်မြဲနေအောင် ကျမသူ့ကို တွန်းကန်အားပေး ထားရသည်။
Oversea သွားရသည့် ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်၍ ရဲလင်းအောင်နှင့် အလုပ်ကြပ် ဦးစိုးနိုင်တို့ စကားများကြသည်၊ သီရီလင်္ကာ နိုင်ငံသို့ ကိုထွန်းနှင့် ရဲလင်းအောင်ကို လွှတ်လိုက်သည်၊ ထိုအချိန်က တမီးလ်ကျား သူပုန်များသောင်းကျန်းနေသည်၊ ရဲလင်းအောင် တို့ပြင်နေသော သင်္ဘောအနားက သင်္ဘော ဖေါက်ခွဲခံရသည်၊ အစိုးရက နိုင်ငံခြားသားများကို ထိုအနီးတဝိုက်မှ ပြန်စေသည်၊ ထို့အတွက် အလုပ်မပြီးခဲ့ချေ၊ ပြန်ရောက်သောအခါ သူဌေးက အလုပ်မပြီး၍ ဆူသည်၊ တကယ်တော့ ထိုအလုပ်သည် ဦးစိုးနိုင်ရဲ့ လူတွေအတွက်ဖြစ်သည်၊ အန္တရာယ်ရှိ၍ ရဲလင်းအောင်တို့ကို လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ပထမတွင် ကိုထွန်းက အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲပြီး၊ ထိပ်တိုက်တွေ့ ကြသောအခါ ရဲလင်းအောင်နဲ့ဖြစ်သည်၊
ဒီလိုနဲ့ရဲလင်းအောင် အလုပ်ထဲတွင် အဆင်မပြေတော့။
ဒီအတွက် ကျမတို့ ရှေးရေးအတွက် plan စီမံချက်တွေ လုပ်ရသည်၊ ပထမဦးဆုံး နှစ်ပြည့်တာနဲ့ PR (အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်) တင်မည်၊ သူတို့မတင်ပေးလည်း ကိုယ်ဟာကိုတင်မည်၊ တစ်ချိန်ထဲမှာ အလုပ်သစ်ရှာမည်၊ အထောက်အကူ ဖြစ်ရန်အတွက် ကျမလည်း အမြဲတမ်း အလုပ်တစ်ခု လုပ်ဘို့လိုအပ်မည်၊ ဒီကြားထဲ အလုပ်ထဲတွင် အစဉ်ပြေသလို ရေလိုက်ငါးလိုက်နေရန်ု ရဲလင်းအောင်ကို ပြောထားရသည်။
ကျမ၏ လင်မယားနှစ်ယောက် အလုပ်ရှာ စီမံကိန်းကြီးစပါသည်၊ ပထမဦးဆုံး ဈေးအသင့်သင့် ကွန်ပြူတာတစ်လုံးဝယ်ရသည်၊ သတင်းစာပုံမှန်ဝယ်၊ အထူးသဖြင့် စနေနေ့ သတင်းစာနှင့် အင်တာနက်ထဲကြည့် စာအုပ်ထဲတွင် သူနဲ့ကိုက်မဲ့ဟာ ကိုယ်နဲ့ကိုက်မဲ့ဟာ ဇယားချ၊ ဖေါ်လိုးအပ်လုပ်နှင့် တစ်လကုန်သွားသည်၊ ရဲလင်းအောင် အင်တာဗျုး သုံးခါဝင်ရသည်၊ ကျမ မဝင်ရသေး၊ ဖုန်းထဲမှာတောင် အဟောက်ခံရသေး၊ ‘မင်းကဒီအလုပ်ဟာ ဘာအလုပ်လဲသိလို့လား၊’ ‘မသိပဲနဲ့ဘာလို့လျှောက်တာလဲ၊’
ကျမကလဲ ‘ကျမ အလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါ၊’ ‘ဒီနေရာကလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ရမဲ့နေရာ မဟုတ်ဘူး၊’
‘မင်းတို့လိုမြန်မာပြည်ကလာတဲ့သူက ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်ထင်လို့လား၊’ စသဖြင့်စုံနေပါသည်၊ ကျမစိတ်မပျက်သွားပါ၊ လာခဲ့ပါဆို၍ ဝမ်းသာအားရသွားလျှင် စားမေးပွဲလိုမေးခွန်းတွေ ဖြေရပြီးပြန်လာရသလို၊ ပွဲစားတွေလဲရှိသေးသည်၊ တစ်ခါတစ်လေ တစ်နေရာထဲမှာ မြန်မာတွေ သုံးယောက်လေးယောက်ပြုံလို့၊ တစ်ချို့ကလည်း မိတ်ဖွဲ့လို့ရသလို၊ တစ်ချို့ကလည်း ပြိုင်ဘက်ကြီးအလား၊
ရဲလင်းအောင်ကတော့ “ ‘မ’ရယ် နင် မြန်မာပြည် အတွေ့အကြုံမရှိလို့နေမှာ၊ ပရောဖက်ရှင်နယ်ဘက် မရှာပါနဲ့လား” ဆိုသည်၊ ကျမကလဲ ကျမတားကက်နဲ့ကျမ ဘဝဆိုတာဒီလိုရပ်ထားလို့ဘယ်ရမလည်း။
တစ်နေ့မှတော့ ကျမကို အင်တာဗျုး လှမ်းခေါ်သည်၊ ငါ့ကိုခေါ်တာ ဘယ်ကလဲ စာအုပ်ထဲ ပြန်ရှာ၊ လျှောက်တာတွေများတော့ မမှတ်မိ၊ တော်သေးသည် စာအုပ်ထဲရှိနေလို့၊ ဂျပန် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်၊ အလုပ် သဘောကို ဖေါ်ပြထားသလို၊ ရှေ့ဆက် အလုပ်ရရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ၊ ဘာဖြစ်ချင်လဲပါ ထည့်ရေးခိုင်းထားသည်၊ စီမံခန့်ခွဲရေး သင်တန်းတက်ထား၍၎င်း စာအုပ်တွေဖတ်ထား၍၎င်း ၂မျက်နှာလောက်ရေးပေးလိုက်သည်၊ အင်တာဗျုးနေ့မှာဘုရားကို လိုသည်ထက်ပိုရှိခိုး၊ ရုံးဆန်ဆန် အဝတ်အစားကိုဝတ်ပြီး၊ မမြင့်ကို ၂ခါထက်မနည်းစစ်ခိုင်းသည်၊ မမြင့်ကလဲ ငါ့ညီမ အိုကေပြီ သေချာပေါက်ရရမယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ကုမ္ပဏီ ရုံးရှိရာ ရာဖယ်ပလေ့သို့အင်အားအပြည့်နဲ့ထွက်ခဲ့သည်၊ လုပ်ရမည့်အလုပ်က Technical Assistant Engineer တားကက်ထဲတော့ဝင်သည်၊ ရဲလင်းအောင် ပြောသလို ကိုယ်ကဘာမို့လဲ၊ အလျှော့အတင်းတော့ လုပ်ရမည်၊ ဒါမှဒါပဲဆိုပြီး တင်းနေလို့က ဘာမျှဖြစ်မလာ မြောသွားနိုင်သည်၊ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို အရယူရမည်။
ရာဖယ်ပလေ့ရှိရုံးအဆောက်အဦးသို့ရောက်သည်၊ တက်ရမည်က ၂၂ ထပ် ရင်တွေခုန်လို့နေသည်၊ ကျမဘဝမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရုံးအထပ်မြင့်သို့ တက်ဘူးခြင်းဖြစ်သည်၊ ဧည့်ကြိုစားပွဲတွင် သတင်းပို့ပြီး ခဏ စောင့်ရသည်၊ ပြီးနောက် ကျမ၏စာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းကာ အင်တာဗျုးမည့် အခန်းထဲကို ဝင်စေသည်၊ အခန်းထဲတွင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ အပြည့်နဲ့ ဂျပန်တစ်ယောက်ထိုင်နေသည်၊ ကျမကိုထိုင်စေပြီး ဘာမျှမပြောသေးပဲ ကျမ၏ စီဗွီ၊လျှောက်လွှာနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်နေသည်၊ တိတ်ဆိတ်ခြင်းက အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ကျမကို ခြောက်လှန့်စေကာ ချွေးများပင်ထွက်လာသည်၊ ကျမလည်း သူကြည့်နေသော စာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်ကာ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်သည်၊ ဆယ်ငါးမိနစ်ခန့်ကြာလျှင်၊ ‘မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား ၊’ ‘ဟုတ်ကဲ့’ ဟု မေး၍ပြန်ဖြေလိုက်သည်၊ ဦးစွာ ကျမတက်ခဲ့သော ကျောင်းများနဲ့ သင်ယူခဲ့သော ဘာသာရပ်များကို ရှင်းလင်းပြောပြခိုင်းသည်၊ ပြီးနောက် လျှောက်လွာတွင် ကျမရေးထားသော အကြောင်းအရာများကို ပြန်ရှင်းခိုင်းသည်၊ ဒီ ကုမ္ပဏီ အကြောင်းဘာသိသလဲ မေး၍ သိသလောက်ဖြေလိုက်သည်၊ ကျမကို ဘာလို့သင်တန်းတွေ ခဏခဏ တက်သလဲဟုမေးရာ၊ learning လုပ်ချင်၍ ဟုဖြေလိုက်သည်၊ ကျမ၏ learning လုပ်နိုင်မူ့ ကိုမေးသည်၊ သင်ရင်အတတ်မြန်ကြောင်းဖြေလိုက်သည်၊ ရိုဘော့တစ် အကြောင်းကို ကျမကိုရှင်းပြပြီး ဘယ်လောက်သိသလဲမေးသည်၊ တစ်ချို့သီအိုရီများကိုကြားဘူးပြီး၊ ဘာမှမသိကြောင်းဖြေလိုက်သည်၊ ကျမ၏လက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံခြားသို့သင်တန်းသွားနိုင်သလားမေးရာ၊ လောလောဆယ်ကိုရှင်းပြပြီး၊ သွားနိုင်သည်ဟုဖြေလိုက်သည်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့နာမည် မူရာကာမီ ဖြစ်ကြောင်း၊ Technical Manager ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်တာဗျုးပြီးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အက်ဒမင်အရာရှိကို စောင့်ရန်မှာပြီး ထွက်သွားသည်။
ခဏနေကြာ အက်ဒမင်အရာရှိ အမျိုးသမီး ရောက်လာပြီး၊ ‘ကွန်ကရက်ကျုလေးရှင်း မင်းကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီ၊’ ဖေါင်တစ်ခုထဲတွင် ရေးထားသည်များကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းပြကာ၊ လစာကမင်းတောင်းတာထက် ၃၀ဝ ပိုတယ်၊ EP ပြောင်းရမယ်၊ ကျမကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းသည်၊ ကုမ္ပဏီ ပေါ်လစီများကိုရှင်းပြသည်၊ မနက်ဖြန်တစ်ခေါက်ထပ်လာရန် နှင့် EP ကျရင် အလုပ်စ ဆင်းရမည်ဟုဆိုသည်၊ ထိုနောက် ကျမကို စာအုပ်၂ အုပ်ပေးသည်။ လောလောဆယ်တွင် မန်နေဂျာက မင်းကိုဖတ်ဖို့ဟုဆိုသည်၊ စာအုပ်တွေက Robotic in Industrial Automation နှင့် Basic Robotic Engineering တို့ဖြစ်သည်။
ရုံးအဆောက်အဦးအောက်ရောက်လျှင် ရဲလင်းအောင်ကို ဖုန်းလှမ်းဆက်သည်၊ အလုပ်ရပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်ရောက်ရင် အသေးစိပ်ပြောပြမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်သည်၊ မမြင့်ကိုလည်း လှမ်းအသိပေးလိုက်သည်၊ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အင်တာဗျုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်ခန့်လိုက်သည့်အတွက် ကျမပျော်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း။
ပထမဦးဆုံးအလုပ်စဆင်းသောနေ့မှာ ထွေထွေထူးထူးသိပ်မရှိခဲ့၊ ကျမ နိမ်းကဒ်လေးကို ကြည့်ကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပီတိ တွေဖြစ်နေသည်၊ ရဲလင်းအောင်မှာ နိမ်းကဒ်မရှိ အလုပ်ကဒ်ပဲရှိသည်၊
Moe Sandar, Technical Assistant Engineer, Tenso Singapore Company Ltd.
ကိုယ်ပိုင်စားပွဲ၊ ကွန်ပြူတာနှင့် Robotics Trends Newsletter, Robotics မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့၊ လောလောဆယ် သန့်ရှင်းသပ်ရပ် နေသော အလုပ်စားပွဲကို ကြည့်ကာ ငါစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးတာ ဟုတွေးနေမိသည်။
ကျမ အလုပ်ရသော Tenso Company သည် ရိုဘော့တစ် မရှင်းများ တီထွင်ပြုလုပ်ရာတွင် အစပျိုး ခဲ့သော pioneer Company ဖြစ်သည်၊ စင်္ကာပူတွင်အခြေထိုင်ကာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများကို ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်၊ ရာဖယ်ပလေ့တွင် ဒေသရုံးချုပ်ရှိပြီး၊ တွားစ်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိန်းရေး အလုပ်ရုံရှိသည်၊ ကျမက Technical Manager ကို assistant လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်၊ ပထမသုံးလတွင် ကျမလုပ်ရမည့်အလုပ်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ product မျိုးဆက်များကို ယေဘူယျ လေ့လာရန်ဖြစ်သည်၊ အသေးစိပ်သိရန်မလိုဟုဆိုသည်၊ presentationပြင် filesတွေတွဲ၊ products လေ့လာရင်း ရာဖယ်ပလေ့နှင့်တွားစ် ပြေးနေရသည်၊ ဒီကြားထဲ ရဲလင်းအောင်ကိုလည်း အလုပ်ဝိုင်းရှာပေးရသည်၊ အင်တာဗျုးတွေဝင်ပြီး အလုပ်မရ၊
ရဲလင်း နင်တစ်ခုခုလိုနေပြီ၊ ဖြည့်ပေးလေ၊ ကျမဘာဖြည့်ရမယ်မသိ၊
ကျမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ကလင်မန်တီဘက်မှာပင် အိမ်ခန်းတစ်ခုလုံးငှါးနေဖြစ်သည်။
ဒီလိုနဲ့ကျမ ဂျပန်သင်တန်းသွားတက်ဘို့ ဖြစ်လာသည်၊ သုံးလကြာမည်၊ အလုပ်ရချင်၍သာ နိုင်ငံခြားသွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုခဲ့သည်၊ တကယ်တော့ နိုင်ငံတကာ လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးတွေ ဖြတ်ရမှာ ကျမ ရင်အလေးဆုံးပင်ဖြစ်သည်၊ လင်မယားနှစ်ယောက် အနွေးအင်္ကျီ လိုက်ဝယ်ကြသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကို အစဉ်ပြေသလိုနေရန် အထပ်ထပ်မှာမိသည်၊ ရဲလင်းအောင်က ကိစ္စမရှိပါဘူး ငါပြန်သွားရုံပဲ၊ ဟာမဟုတ်တာ ဟုကျမဆိုမိသည်။
အိုဆာကာ ကိုင်ဆိုင်းလေဆိပ် လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးမှ ကျမကိုဖြတ်ခွင့်မပေး၊ ရုံးခန်းတစ်ခုသို့ခေါ်သွားသည်၊ ဗီဇာတွေ စာရွက်စာတမ်းများကို ရုံးက အကုန်လုပ်ပေးလိုက်တာပဲ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်၊ ကျမဘဝမှာ အခန်းတွေထဲကို ရောက်ရမည်ဟုဇာတာများ ပါလေသလား၊ အရာရှိရောက်လာပြီး passport ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဇာဓါတ်ပုံ ကို သေသေချာချာကြည့်သည်၊ ကျမ နိမ်းကဒ်ကိုတောင်းသည် ပေးလိုက်သည်၊ အိုဆာကာရုံးက လူတစ်ယောက်ယောက်၏ နိမ်းကဒ်ကိုတောင်းသည်၊ ကျမမှာမရှိ၊ ကုမ္ပဏီ ပရိုဖိုင်နှင့် ရှိသည့် ဂျပန် နိမ်းကဒ်တွေ ပေးလိုက်သည်၊ နိမ်းကဒ်တွေလိုက်ကြည့်ပြီး ခဏထွက်သွားသည်၊ ပြန်လာပြီး ကျမ passport ပြန်ပေးသည်၊ You can go, somebody is waiting for you. Passport ထဲကြည့်လိုက်သောအခါ လိမ္မော်ရောင် စတစ်ကာ ကပ်ထားသည်၊ တုံးထဲတွင် ထရိန်နင် ဟုရေးထားပြီး ၆လ နေထိုင်ခွင့်ရသည်။
ဂျပန် သုံးလထရိန်နင်သည် ကျမအတွက် မြန်ဆန်လှပေသည်၊ သင်တန်းတက်၊ ရဲလင်းအောင်ဆီဖုန်းဆက်၊ နာမည်ကြီးနေရာတွေ လျှောက်လည်နဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ စင်္ကာပူ ပြန်ရောက်သောအခါ ကျမ ရာထူးပြောင်းသွားသည်၊ Technical Engineer ဖြစ်သွားသည်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ after sales ကိစ္စများ၊ customer ကိစ္စများ ကျမစကိုင်တွယ်ရသည်၊ မန်နေဂျာက အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး သင်ပေးသလိုဖြစ်သည်၊ Technical ကိစ္စများကို ကျမအသေးစိပ်သိစရာ မလို ဘယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်သလဲသိဘို့လိုသည် အချိန်မှီထိုသူဆီမှ အဖြေရက customer ကိုဖြေရှင်းနိုင်ဘို့ပင် ဖြစ်သည်၊ Globalကုမ္ပဏီဖြစ်၍ ဂျပန်လိုတတ်ရန်မလို သို့သော် Technical အကြောင်းများကိုမူ ဂျပန်လိုရေးထားတာများသည်။
ရဲလင်းအောင်၏ အလုပ်အခက်အခဲ များစွာရှိ၍ ကျမတို့နှစ်ယောက် PR တင်ဖြစ်သည်၊ ရဲလင်းအောင်သည် အလုပ်၏ဖိစီးမူ့ဒဏ်ကြောင့်၊ စိတ်မရှည်ခြင်း ဒေါသဖြစ်လွယ်ခြင်းနှင့် ပိုဆိုးသည်က အလုပ်ထဲကလူတွေနဲ့ပထမတော့ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်း ဘီယာသောက်သောက်လာသည်၊ ကျမအလုပ်ရလာသောအခါ အိမ်၏လိုအပ်စားရိတ်များကို ကျမကအကုန်ကျခံသည်၊ ရဲလင်းအောင်က ဖုန်းဖိုး၊ ရေမီးဖိုးပဲပေးသည်၊ ရောက်ကာစက ကျမငွေကို တွက်ချက်၍ သုံးသည် ကျမတို့ ၏ ငွေဝင်ငွေထွက်ကို သိသည်၊ ခုနောက်ပိုင်း ကျမသူ့ကိုမေးရသည်၊ မကျေနပ်စွာပြန်ဖြေသည်က ‘နင်လစာနှင့် နိုင်းမလို့ လား၊ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတာ တစ်ခါတစ်လေတော့ သုံးမှာပဲ၊’ ကျမလဲ အပြောအဆိုခံကာ ထိန်းရသည်၊ ဒီအချိန်မှာတော့ ကျမလစာသည် သူ့လစာထက်ပိုရနေပြီ။
ကိုယ်မသိသော professional ထဲသို့ဝင်မိသောကြောင့်၊ အလုပ်ထဲတွင်လည်း ထင်သလောက်မလွယ်၊ စနေ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်လည် တစ်ပါတ်စာ တောင်လိုပုံနေသော နှစ်ယောက် အဝတ်များကို လျှော်ရ မီးပူတိုက်ရ၊ တစ်ခါတစ်လေ အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းကို သူ့ကိုချက်ကျွေး ဖြစ်သည်၊ စင်္ကာပူသည် ကျမကို ပြောင်းလဲလိုက်သလို ရဲလင်းအောင်ကိုလည်း ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
ကျမတို့နှစ်ယောက် စင်္ကာပူ PR ကျသည်၊ ကုမ္ပဏီမှ ထိုးရမည့်စာရွက်ကို ကျမတို့ကုမ္ပဏီက လိုလိုလားလား ဆောင်ရွက်ပေးသည်၊ ရဲလင်းအောင်တို့ကုမ္ပဏီက ဦးစိုးနိုင်ညစ်ထားသဖြင့် စာရွက်မရပေ၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်းမှလွဲ၍ ရဲလင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ၊ ကျမက ‘သူဌေးနဲ့ သွားတွေ့ ကြရအောင် ငါလဲလိုက်မယ်၊’ ရဲလင်းအောင်ကို မနက်ဖြန်ခွင့်ယူခိုင်းလိုက်သည်၊ ကျမလဲခွင့်ယူလိုက်သည်၊ နောက်နေ့ကျမ သူတို့ကုမ္ပဏီကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး သူဌေးရှိမရှိမေးလိုက်သည်၊ ရှိသည်ဟုဖြေသည်၊ ဘယ်သူလဲဟုမေးရာ ကျမတို့ကုမ္ပဏီကပါဟုဖြေလိုက်သည်၊ ဘယ်အချိန်ထိရှိမလဲ မနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးရှိတယ်ဟုဖြေသည်၊ ကျမတို့နှစ်ယောက် ရဲလင်းအောင်တို့ကုမ္ပဏီရှိရာ ဂျိုရောင်းဘက်ကို တက်ဆီ ဖြင့်ရောက်သွားသည်၊ အဝင်ဝတွင် ရဲလင်းအောင်၏ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် တစ်ချို့ကိုနူတ်ဆက်ပြီး စာရေးမထံ ကျမတန်းဝင်သွားသည်၊ သူဌေးနဲ့တွေဘို့ ခုနဖုန်းဆက်ထားတာ၊ သူဌေးအခန်းထဲမှာရှိတယ် ဝင်သွားဟုဆိုသည်၊ သူဌေးဆီအဝင် ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို စားတော့ဝါးတော့မလို ကြည့်နေကျသည့် ဦးစိုးနိုင်နှင့် လူတစ်ချို့ကိုတွေ့ ရသည်၊ သူဌေးသည် စာရွက်တစ်ချို့ကို ဖတ်နေသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကိုသူဌေးမသိပေ၊ ကျမကပဲ ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို မိတ်ဆက်လိုက်သည်၊ ဂျပန်တွေ သင်ပေးထားသော အပြုံးကိုသုံးကာ၊
‘ ငါတို့ မင်းဆီကအကူအညီတစ်ခုလိုအပ်နေတယ်၊ မင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်၊’
‘ငါတို့ အင်မင်ဂရေးရှင်းမှာ PR တင်ထားတာ ဒီကုမ္ပဏီကလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ် မင်းဆိုရင် အကောင်းဆုံးလို့ငါထင်တယ်၊’ သူဌေးရှေ့သို့ စာရွက်ထိုးပေးလိုက်သည်၊ စာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ဆိုင်းထိုးရမည့်နေရာတွင် ထိုးပေးလိုက်သည်၊ တံဆိပ်တုံးကို စားရေးမကို လုပ်ခိုင်းရန်ပြောသည်၊ ကျမက ‘ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ကြင်နာမူ့ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး၊’ ရဲလင်းအောင်ကလည်း ‘ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူဌေး’ ဟုနူတ်ဆက်ပြီး၊ စာရေးမလေးဆီသွား ကုမ္ပဏီတံဆိပ်နှိပ်သည်၊ စာရေးမလေးက ကော်ပီတစ်စုံယူထားကာ စာရွက်ကိုပြန်ပေးသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကိုHR နှင့်တွေ့ရန်မှာသည်၊ နောက်နေ့ရဲလင်းအောင်ကို နံနက်စောစော HR ဆီသွား၊ လုပ်စရာရှိတာလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ခွင့်တစ်ပတ်ယူခဲ့ရန်မှာလိုက်သည်၊ စိတ်မောလူမောစွာဖြင့် PR ကိစ္စ ပြီးစီးသွားသည်။
ရဲလင်းအောင်ယခုအလုပ်မှာ မနေသင့်တော့၊ ရဲလင်းအောင် အလုပ်ရှာဖွေရေးကို ကျမစနစ်တကျ စီစဉ်ရသည်၊ ရမဲ့ရတော့လည်း အလုပ်၂ခု တပြိုင်ထဲရသည်၊ PR၏တန်ဘိုးကို သိလိုက်ရသည်၊ စက်ရုံ production အလုပ်နှင့် Maintenance အလုပ် ကြိုက်ရာကို ရွေးခိုင်းလိုက်သည်၊ ကျမကတော့ Maintenance အလုပ် ကိုကြိုက်သည် အစိုးရလင့်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်၍ဖြစ်သည်၊ ခံစားခွင့်တွေလဲများသည်၊ နောက်ဆုံးသူလဲ အဲဒီအလုပ်ကိုရွေးလိုက်သည်၊
ရဲလင်းအောင်ကုမ္ပဏီသစ်သည် ကျောင်းကြီးတစ်ခု၏ Maintenance လုပ်ငန်းများကို ကန်ထရိုက် ယူထားသည်၊ ရဲလင်းအောင် က M&E engineer ဖြစ်သည်၊ အလှည့်ကျဆင်းရ၍ နေ့အားရက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိသည်ကလွဲလို့ အဆင်ပြေသည်၊ ရဲလင်းအောင်အလုပ်သစ်မှာ အဆင်ပြေ၍ ကျမစိတ်သက်သာရခဲ့သည်၊ ကျမကိုတော့ ဂျပန်တွေက မောင်းကောင်းနေဆဲ။
လင်မယားနှစ်ယောက် အလုပ်တွေအဆင်ပြေသော်လည်း တွေ့ချိန်နည်းလာသည်၊ ကျမကအိမ်ကို အလုပ်တွေပါလာ၊ ညညပင်တွေ့ရသော်လည်း တစ်ချို့ညတွေ ရဲလင်းအောင် အလုပ်ဆင်းရသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကလည်း အရင်အလုပ်ကလူတွေနဲ့ကော်ဖီ၊ ဘီယာ ထွက်သောက်ဆဲ ဖြစ်သည်၊ ကျမရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုဟာနေသလို၊ ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ တစ်ခုခုလိုနေပြီဖြစ်သည်၊ ဒီကြားထဲ ဂျပန်ကိုနောက်ထပ် ၆လ သင်တန်းသွားရဦးမည်၊ စိုင်းထီဆိုင်ရဲ့သီချင်းလေးလို တကယ်နှစ်ကိုယ်ခွဲလို့ရရင် နှစ်ကိုယ်ခွဲပစ်လိုက်ချင်ပါတယ်၊ တစ်ကိုယ်ကအလုပ်ဆီမှာ၊ ကျန်တဲ့တစ်ကိုယ်ကထာဝစဉ်ကြင်နာသူရဲ့အနားမှာပေါ့၊ အလုပ်ကိုလဲလုပ်ချင် ချစ်သူနှင့်လည်းနေချင်။
ရဲလင်းအောင်သည် အလုပ်အားသည်နှင့်အမျှ ဟိုလှုပ်ရှားမူ့ ဟိုအထိမ်းအမှတ်များတွင် ပါဝင်လာသည်၊
အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းကျွေးပွဲ တစ်ခုသို့ရဲလင်းအောင်ခေါ်၍ ကျမလိုက်သွားသည်၊ organize လုပ်သူများနှင့် ရဲလင်းအောင် ရင်းနှီးမူ့ကို ကျမ အံ့ဩစွာတွေ့ရသည်၊ ရဲလင်း နင်ဟာကလည်း၊ ညီမတွေပါ၊ ထိုအထဲတွင် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို ကျမ သတိထားမိသည်၊ အသက်၂၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်၊ ပိန်သည်၊ ဆံပင်ရင်ပတ်လောက်ထိရှည်သည်၊ နူတ်ခမ်းပါးပါးနဲ့ ၊ တက်ကြွသည့်ပုံစံ၊ တစ်ခါတစ်လေ ကျမကို သေချာစိုက်ကြည့်နေသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကိုလည်း ကိုရဲ၊ ကိုရဲနှင့် ရဲလွန်းလှသည်၊ တက်ကြွသည့်လူငယ်များ သဘာဝဖြစ်မည်ဆိုပြီး၊ ဒီအတိုင်းထားလိုက်သည်။
မမျှော်လင့်ပဲ ကိုဇော်ဦးနှင့် ပြပွဲတစ်ခုတွင်ဆုံဖြစ်သည်၊ ဘာတွေဖြစ်၊ ဘယ်နေရာတွေရောက်၊ ဘာတွေလုပ်ကြောင်း ပြောကြရင်း၊ ကိုဇော်ဦးကပင် စကားတွေ အေးအေးဆေးဆေး ပြောရန် ကျမတို့လင်မယား နှစ်ယောက်ကို ညစာကျွေးဘို့ဖိတ်လိုက်သည်၊ ကိုဇော်ဦးတစ်ယောက် အမေရိကားတွင် အခြေချနေပြီ၊ ဆရာဝန်မနှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ သားလေးတစ်ယောက်ပင် ရနေပြီဖြစ်သည်။ ရဲလင်းအောင်က မလိုက်ချင်ဟုငြင်းသည်၊ ကျမကလည်း လိုက်ခဲ့ပါ ငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင် သူသာငါကို မကူညီခဲ့ရင် ငါတို့နှစ်ယောက် ဒီကိုရောက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုလဲဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်ဆို ငါတို့ကကျွေးရမှာ ဒီလိုနဲ့ ရဲလင်းအောင်ပါခဲ့သည်၊ ကိုဇော်ဦးက ညစာကို အမေရိကန် ကလပ်ဘ်မှာကျွေးသည်၊ ဖြစ်ချင်တော့ အဝင်ဝတွင် လုံခြုံရေးက ကျမကို လက်ကိုင်အိတ်ပဲ ဖွင့်ရှာသော်လည်း၊ ရဲလင်းအောင်ကို ဘိနပ်ပါချွတ်ခိုင်းသည်၊ ညစာစားရင်း ကိုဇော်ဦးက သူ့လက်ရှိအလုပ်၊ သူ့မိသားစု နှင့် Robot တွေအကြောင်းပြောသည်၊ ကျမကလည်း လက်ရှိအလုပ်အခြေအနေ၊ တွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲများ၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေအကြောင်းပြောဖြစ်သည်၊ ရဲလင်းအောင်က အမေရိကန်တွေ အကြောင်း၊ မြန်မာပြည် အကြောင်း ပဲဝင်ပြောသည်၊
ရဲလင်းအောင်ကအပြန်တွင် ကျမကို၊ ‘အမေရိကန်တွေ ကြောက်တတ်တာကလဲကမ်းကုန်၊’ ‘အကုန်လုံး သူ့ရန်သူ ထင်နေတယ်၊’ ‘ရန်သူကလည်းပေါတာကိုး၊’
‘တော်တော်ကြီးကျယ်တယ် ပြောလိုက်ရင် အထက်ကချည်းပဲ၊’
ကျမက သူကိုကြည့်လိုက်သောအခါ၊ ‘အမေရိကန်တွေကို ပြောတာ၊’ ‘အမေရိကန်တွေကို ပြောတာ၊’
အင်းလေ သူအရှာခံရလို့နေမှာ၊ ကျမကလည်း ‘ရဲလင်း နင်သွားဈေးဝယ်နေကြ မူစတာဖါဆိုင် ကိုကြည့်ဦး၊’ ‘လာတဲ့ဈေးဝယ်မှန်သမျှ သူခိုးလို့ယူဆပြီး၊ အိတ်တွေပိတ်ခိုင်း၊ အိတ်တွေထားခဲ့ခိုင်းနဲ့၊ ဘာထူးလဲ၊’
‘ကုလားနဲ့ အမေရိကန်တွေနဲ့ တူတူပဲ၊’ ရဲလင်းအောင်ပြန်ဖြေသည်၊
ကျမဘာမျှပြန်မပြောတော့၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဇော်ဦးနှင့် တွေ့ရတာ ကျမဝမ်းသာသည်။
နောက်နေ့တွင် ကိုဇော်ဦးက အလုပ်ထဲတွင် ကျမ ပရက်ရှာများလျှော့ရန်နဲ့ ကျမစိတ်ဓါတ် ပိုခိုင်မာလာစေရန်၊ ယခင် ကျမလုပ်ခဲ့၊ အချုပ်ကျခဲ့သော နိုင်ငံကို ပြန်သွားလည်ရန် အကြံပေးသည်၊ ရဲလင်းအောင်နှင့် တိုင်ပင်ရာ ‘မသွားသင့်ဘူး မ ၊ မေ့ပစ်ထားပြီမဟုတ်လား၊ တစ်ခါထဲမေ့ပစ်လိုက်၊ ပြန်မဖေါ်နဲ့၊’
‘ငါမေ့လို့ မရဘူး ရဲလင်း၊ ပြန်ပြန်ပေါ်နေတယ်၊ ငါ့အတွက် အရေးကြီးလို့ပါ၊ လိုက်ပို့ပေးပါ ရဲလင်းရယ်၊’
‘ငါတော့ မပို့ပေးနိုင်ဘူး၊ နင်တစ်ယောက်ထဲသွား၊ အဲဒီ့ အမေရိကန်ကောင် ခေါ်သွားလေ၊’ ကျမကို အော်ပစ်လိုက်သည်။
နောက်ဆုံး ကိုဇော်ဦး ကျမကို လိုက်ပို့သည်၊ မနက်စောစော လေယာဉ်ပျံ နှင့်ထွက်သွားပြီး၊ နေ့လည်စာစားကာ ညနေ ပြန်လာသည်၊ ကျမ ရဲလင်းအောင်ကို အသိပေးသွားသည်၊ အဲဒီနေ့ညပဲ ကိုဇော်ဦး အမေရိကားသို့ ပြန်သွားသည်။
ငါ့စိတ်တွေ ဘယ်လိုပေါ့ပါးသွားကြောင်း၊ ရှေ့စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာလာအောင် လုပ်မည်၊ သူပြောသလို မေ့နိုင်တော့မည်ဟု ပြောပြရန် ရဲလင်းအောင်ကို စောင့်နေမိသည်၊ ည ၁၀ နာရီထိ ရဲလင်းအောင် ပြန်မလာပါ၊ သူ့ဖုန်းကို ခေါ်ကြည့်သော်လည်း မကိုင်ပါ၊ ကျမဆိုဖါပေါ်လှဲရင်းစောင့်နေမိသည်၊ ည ၁၂ နာရီထိုးခါနီး၊ ဝုန်းဝုန်း အိမ်ရှေ့တံခါး ဖွင့်သံကြားရသည်၊ ကြမ်းလှချည်းလား၊ ရဲလင်းအောင်ဖြစ်သည် မူးလာသည်၊ အရင်နေ့တွေလဲ သောက်လာနေကြဖြစ်သည် ဒီလိုမမူး၊ ကျမလည်း အိမ်ရှေ့သွားပြီး၊
‘ဘာ ဘယ်လိုဖြစ်လာရမလဲ၊ နင့်ကို ငါကမေးရမှာ ဘာဖြစ်လာသလဲလို့၊’
ဟာ ဒုက္ခပါပဲ၊ ကျမ တံခါးကိုပိတ်လိုက်သည်၊
ရဲလင်းအောင် ဆိုဖါပေါ်ထိုင်ကာ ကျမကို လက်ညိုးထိုးပြီး၊
‘သိပ်ပျော်ခဲ့တာပေါ့၊ ဘာဖြစ်လာသလဲ၊ ဘာဖြစ်လာသလဲ၊ ငါကပြန်မေးရမှာ၊’ သူ့အသံကတော်တော်ကျယ်၍ ကျမက ‘ရဲလင်း ငါဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး၊ မနက်မှ ပြောရအောင်၊ ဘေးအခန်းတွေကို သတိထားဦး၊’
‘ဘာခုမှ ကြောက်နေတာလဲ၊ လူသိမှာကို ကြောက်နေတာလား၊’ ဟုထအော်သည်၊
‘ရဲလင်း ရဲတွေဘာတွေရောက်လာရင် ဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်၊’
‘ရောက်ရောက်ကွာ၊ ဒီထက်ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး၊’ ‘ကိုယ့်ကိုကိုယ် တအားအထင်ကြီးတဲ့ မိန်းမ၊’
‘ဘုန်း’ဆိုပြီး ဆိုဖါကို ထကန်သည်၊ ‘အမေရိကား လိုက်သွားပါလား၊ ပိုအထင်ကြီးသွားကြလိမ့်မယ်၊’
‘ရဲလင်း နင်သတိထားနော်၊ ငါဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊’
ရဲလင်းအောင်ထပြီး လက်ညိုးထိုးကာ ‘ဘာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလဲ၊ ဟင်း နှစ်ယောက်ထဲသွားတယ်၊’ ‘ဖြစ်ရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ၊’
‘အမေရိကား လိုက်သွား၊ ငါအတွက် မလိုအပ်တော့ဘူး၊’ ‘နင်လဲလုပ်ချင်တာလုပ်၊ ငါလဲလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်၊’ အော်ပြန်သည်၊
ကျမလည်း သူ့အတွက်ခပ်ထားသော ရေခွက်နဲ့ သူ့မျက်နှာကို ပက်ထည့်လိုက်ပြီး၊
‘ရဲလင်းအောင် နင်ငါ့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို စော်ကားတာနှစ်ခါရှိပြီး၊’ ‘ငါဘယ်လိုလဲဆိုတာ နင့်အစထဲကသိတယ်၊’ ‘နင်စဉ်စားကြည့်ပြီးမှပြော၊’
‘စဉ်စားစရာမလိုဘူး မှန်နေတာ၊ ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့၊’
‘တောက်’ ကျမ တောက်ခတ်လိုက်သည်၊
‘နင်ကမူးပြီးတော့ ဒီလိုပြောတာပေါ့၊’ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ကျမ ဧည့်ခန်းတွင်အလှပြထားသော အရက်ပုလင်းကို ဖွင့်လိုက်သည်၊
ရဲလင်းအောင်ကတော့ ‘အသုံးမကျတဲ့ မိန်းမ၊’ ‘အသုံးမကျတဲ့ မိန်းမ၊’ ရွတ်နေသည်၊
ကျမ စားပွဲပေါ်တွင် အရက်တစ်ပုလင်း၊ ခွက်နှစ်ခွက် တင်လိုက်သည်၊ သူ့ကို စိုက်ကြည့်လိုက်သည်၊
‘ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊’ ‘ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊’ ‘ဟင်းဟင်းဟင်း’ ရဲလင်းအောင်က မူးနေတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကျမကိုမေးသည်၊
‘နင်က မိန်းမတစ်ယောက်ကို မူးနေမှာပြောရဲတယ်၊’ ‘လာနင်နဲ့ငါ တူတူမူးမယ်၊’
ကျမတစ်ခွက်လုံး သောက်ချလိုက်သည်၊ ဆိုးဝါးတဲ့ အရသာနဲ့ လည်ချေုာင်းတစ်ခုလုံး၊ ရင် တစ်ခုလုံး ပူဆင်းသွားသည်၊ကျမလဲသွေးပူနေပြီဖြစ်သည်၊
ရဲလင်းအောင်နဲနဲတွေဝေသွားပြီး၊ ‘ရတယ်လာပြီ၊’ တစ်ခွက်မော့ချလိုက်သည်၊ မျက်နှာနဲနဲ ရှုံမဲ့သွားသည်၊
ကျမ နောက်ထပ်တစ်ခွက် ထပ်သောက်ကာ၊ ‘လာလေ လာလေ’ သူကိုခေါ်လိုက်ပြန်သည်၊ နောက်ထပ်တစ်ခွက် မော့ချလိုက်သည်၊ ကျမကလည်း ‘ပြောလေ ပြောချင်တာတွေ ပြောလေ၊’
ဒီလိုနဲ့ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်၊ မိုးလင်းတော့ ကျမက ကုတင်ပေါ်မှာ၊ ရဲလင်းအောင်က ဆိုဖါပေါ်တွင် အိပ်နေကြသည်၊ ထိုနေ့က ကျမနှင့် ရဲလင်းအောင်တို့ အရေးပေါ်ခွင့် ယူလိုက်ရသည်၊ ရဲလင်းအောင် ကျမကို မတောင်းပန်ခဲ့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ အရက်မူးပြီးပြန်မလာတော့ပါ။
နောက် နှစ်ရက်နေတော့ ကျမ ဂျပန်ကို ၆လ သင်တန်းသွားရသည်၊ ဒီသင်တန်းက တကယ်ကိုမလွယ်၊ နည်းပညာသစ်တွေရယ်၊ products အသစ်တွေရယ်၊ ဈေးကွက်အသစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူ့ တွေဖြစ်သည်၊ ၆ လကျော် အတွင်း ရဲလင်းအောင်ကို ဖုန်းသုံးခါပဲ အဆက်အသွယ်ရသည်၊ ပြန်လာသောနေ့တွင်လည်း အဲဒီနေ့ အလုပ်တွင် အရေးကြီးသည်ဆို၍ လာမကြိုချေ။
ကျမအိမ်တွင် ပစ္စည်းများကို သေသေချာချာ သပ်သပ်ယပ်ယပ် ထား၍ ဘယ်နေရာ၊ ဘာရွေ့သွားသလဲသိသည်၊ ကျမ မရှိတုန်း ရဲလင်းအောင်မဟုတ် တစ်ယောက်ယောက် လာကြောင်းကျမ သိသည်၊ ရဲလင်းအောင်ကိုမေးရာ ‘အေး သူငယ်ချင်းတွေလာတယ်၊’ ‘နင်အိမ်လဲ ဘယ်သူမှ မနေချင်ဘူး၊’ ဒါပဲပြောကာ ထွက်သွားသည်၊ ရဲလင်းအောင် အိမ်မပြန်သောနေ့တွေ များလာသည်၊ ပထမတော့ အလုပ်တွေများနေသလိုနဲ့၊ နောက်တော့ ဘာမှအကြောင်းပြချက်မပေး၊ ကျမကတော့ လိုက်တွေ့၊ လိုက်ခေါ် ဘာတွေဖြစ်သလဲမေး၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲမေးနှင့် လင်ပျောက်ရှာနေရသလို၊ သူကတော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ စင်္ကာပူမြို့ထဲမှာပဲဟုဆိုသည်၊ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတာ ကျမသိလိုက်သည်။
ဒီကြားထဲ ကျမကိုအလုပ်က အစမ်းသင် မန်နေဂျာ အဖြစ်တိုးပေးလိုက်ပြန်သည်၊ တာဝန်နှင့် အလုပ်တွေပိုလာသည်၊ တစ်နေ့ မမြင့်ကတွေ့ချင်တယ်ဆို၍ ကျမသွားတွေ့သည်၊ စင်္ကာပူတွင် ကျမ ရဲလင်းအောင်လောက် အသိမိတ်ဆွေ သိပ်မပေါ၊ မမြင့်ခေါ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းက မယုံနိုင်စရာ၊
‘အကြောင်းသိတွေမို့ ခေါ်လိုက်ရတာ ညီမရေ၊’
‘ရဲလင်းကို အေးအေးဆေးဆေး ခေါ်ပြီး သေချာဆွေးနွေးညီမ၊’ ‘ဟိုဘက်ကတော့ အပိုင်တွက်နေပြီ ၊’
‘အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ အတူတူနေတဲ့ ခလေးမလေးတောင် အိမ်ပြောင်းတော့မလို့၊’ ‘ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မဖြစ်ချင်လို့တဲ့၊’
‘ရဲလင်းနှင့်ညီမက လင်မယား ညှိယူကြပေါ့၊ သေချာကိုင်တွယ်ညီမရေ။’
ကျမ ရှက်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း၊ စင်္ကာပူတွင် ရှားရှားပါးပါးခင်မိသော မမြင့်အားကျေးဇူးတင်မိသည်၊ ကျမဆက်လုပ်စရာများကို ဆက်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ရဲလင်းအောင်ကို ဘယ်လိုမှ ဆက်သွယ်လို့မရ၊ နေ့လည် ထမင်းစားချိန်ဖုန်းဝင်လာသည်၊
‘ကျမနာမည် တာရာသက်ထား၊ တာရာလို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်၊’
‘မမိုးစန္ဒာက ကျမကို မသိပေမဲ့၊ ကျမက ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်၊ ကျမကိုမြင်ဘူးပေမဲ့ မှတ်ထားလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး၊’
‘ပြောစရာရှိပြောပါ မတာရာ၊’ ကျမစိတ်မရှည်တော့၊ ဘာတွေလဲမသိ၊
‘ကျမကလည်း ပြောမှာပါ၊’ ‘ဒီမယ် ကိုယ်ကို့မချစ်၊ မကြိုက်တော့တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နောက် စွတ်လိုက်မနေပါနဲ့၊’
‘ကျမ ကိုရဲ ကိုပြောတာ၊’ ‘ရှင့်လို ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုချစ်ရမှန်း မသိ၊ ဘယ်လိုပျော်အောင်ထားရမှန်း မသိ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တအားအထင်ကြီးတဲ့ မိန်းမ၊ ကိုရဲ အချစ်နှင့် မတန်ဘူး၊’
‘ငါက ရဲလင်းအောင်ရဲ့ မိန်းမ၊ နင်မို့လို့ အရှက်မရှိ၊’
‘ဒီမယ် ဘာအရှက်မရှိတာလဲ၊ ရှင်ကမှ ကိုယ်ကို့မပေါင်းချင်တော့တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နောက် စွတ်လိုက်နေတယ်၊ ကိုရဲက ကျမကို သိပ်ချစ်တာ၊’
မိန်းမတစ်ယောက်ကို မိန်းမတစ်ယောက်က ပေါ်တင်စိန်ခေါ်လိုက်တာလား၊
ကျမ ရဲလင်းအောင်နှင့် တွေ့မှကိုဖြစ်တော့မည်၊ သူ့ မန်နေဂျာဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်သည်၊ ရဲလင်းအောင်ဘယ်မှာ ရှိလဲစုံစမ်းလိုက်သည်၊ ဒီကြားထဲ ဟိုကောင်မလေးက SMS တွေဆက်တိုက်ပို့နေသည်၊ မကြာမှီ ရဲလင်းအောင်နှင့်ဖုန်းရသည်၊ နင်လာပြီးတော့ကို ရှင်းမှဖြစ်တော့မယ် ရဲလင်းအောင်ဟု ကျမပြောလိုက်သည်၊
လောလောဆယ် သူမလာနိုင်ကြောင်း၊ မနက်ဖြန် ကျမထိုင်နေကြ ဆိုင်ကိုချိန်းလိုက်သည်၊ ရဲလင်းအောင်က အဲဒီနေရာတွေကို မလာချင်ဘူး ဟုဆိုသည်၊ နောက်တော့ လာခဲ့မည်ဟုဆိုသည်။
ကြုံဘူးကြပါသလားလို့ ကျမမေးလိုက်ချင်သည်၊ ကျမကို ကျမ တော်တော်ညံ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟု ကိုယ်ကိုကိုယ် မှတ်ချက်ချမိသည်၊ ကျမစိတ်အေးအေးထားပြီး ရေရှည်အတွက် စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
Posted by sosegado at 4/03/2010 10:50:00 PM
သူကိုယ်နဲ့မနေချင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့လဲ မဆွဲထားတော့ပါဘူး။ နေချင်တယ်ဆိုရင်ကော မိုးစန္ဒာ
ဖတ်လို့ကောင်းတာထက် စင်ကာပူကအကြောင်းတွေကို ကိုဆိုဆီက တော်တော်လေး အသေးစိတ်ရေးထားတာ တွေရလို့လေ...အားလုံးက တကယ် အပြင်မှာ မြင်တွေ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ဆင်နေတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်မိတာ...အဆက်လေးလည်း မြန်မြန်ရေးပေးပါဦး...
ဖတ်သွားတယ်.. သိတ်ကောင်းတဲ့ စာတွေဟာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လို့ ဘဲ ထင်ရတယ်.. စာရေးတာတော်လို့.. ဒါ့အပြင် တကယ်လည်း ဖြစ်နိုင်လို့...
နှစ်ခုစလုံးများ ဖြစ်နေမလား... မျှော်နေပါတယ်.. ဆက်ရန်ကို..
တရားပွဲလာတာတောင် စိန်ဘယက်၊ စိန်လက်ကောက်၊ ရွှေတဝင်းဝင်းနဲ့၊ ဘုန်းကြီးနှင့် ဘယ်လိုရင်းနီးကြောင်းလဲပြချင်သေးသည်၊
အပြင်မှာ မြင်တွေ့ ဖြစ်ပျက်နေတာလေ-
ကိုတည်ငြိမ်ရေ...စာကြွေးတွေလာရှင်းတာ...ကျမတော့ ဒါကို တကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့ပဲ ထင်နေတော့တယ် ယုတ္တိရှိလွန်း၊ အသက်ဝင်လွန်းလို့....နောက်တပိုင်းမျှော်နေမယ်...:)
လက်တွေ့လောကနဲ့ အ၇မ်းကိုနီးစပ်တဲ့ အဖြစ်ကလေးတစ်ခုပါ..
ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေ တကယ်ကိုဖြစ်နိုင်ပါလားလို့ တွေးမိတယ်
အထူးသဖြင့် မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားနဲ့ယှဉ်ဘောင်တန်းလာနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်မျိုးမှာပေါ့..
ယောက်ျားတွေရဲ့ အတ္တက မိန်းမတွေကို သူတို့ထက်တော်တဲ့သူ ထက်မြက်တဲ့သူ မဖြစ်စေချင်ကြဘူးနော်..
လူစုံပါလာပြီပဲ၊ မိန်းမတွေရဲ့ အချစ်ကိုတွေ့ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်၊ ဆက်ပါဦး၊ Min Min
ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်တတ်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လား၊ နားလည်မူ့တွေနဲ့ ချစ်ဦးသူတွေ ပြန်လည် အဆင်ပြေသွားမှာလား… ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ရသတွေနှင့် ဆက်ဖတ်နေမယ်။
Hummm......you stoped at the high point.
ဖတ်ပြီးရင်မောလိုက်တာဟယ်... တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံပြီးရေးထားတယ်လို့ ယူဆမိတယ်.... မိန်းမမာနရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဆီကပြေးသွားတဲ့သူကို ဆွဲထားမှာမဟုတ်တာသေချာတယ်...
ကျွန်မ ထင်တာတော့ လင်မယား ဖြစ်လာမှာတော့ နွေးထွေးမှုဆိုတာ သိပ်လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေကြီးပဲ လုပ်နေတော့ အနေများတဲ့ အလုပ်ထဲမှာပဲ အချိန်တွေ ကုန်စေတယ်။ အနေနီးစပ်မှုတွေကြား သာယာတော့တာပေါ့။ မိန်းမ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ရှင်မရဲ့ နွေးထွေးမှုတွေလည်း ဟနေတာလည်းပါပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံးက တကယ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ လင်မယားဆိုရင်တော့ တစ်ကြိမ်သာ မှားခဲ့တဲ့ သူ့အမှားအတွက် ခွင့်လွတ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကွာဟနေတဲ့ လင်မယားကြားထဲက အက်ကြောင်းလေးတွေ ပြန်ဆက်စေချင်တယ်။
ရေးထား မန့်ထားတာတွေကြည့်ပြီး စလုံးက ဒါရိုက်တာ Jack Neo အကြောင်း သတိရလိုက်တယ်၊ တစ်ကြိမ်သာ မှားခဲ့တဲ့ သူ့အမှားအတွက် ခွင့်လွတ်လိုက်ရမလား၊
ကိုယ့်ဆီကပြေးသွားတဲ့သူကို ဆွဲထားမှာမဟုတ်တာသေချာ သလား၊
ဖေါက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှ မကောင်းဘူး။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဟာ မိန်းမ ရှိပြီးသားလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊
ယောက်ျား ရှိပြီးသားလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊
ကိုယ်အချစ်က သာနေရင် ကိုယ်ကိုပြန်ချစ် ကိုယ်ဆီ ကိုရောက်လာမှာပဲ၊
ဒါဖေါက်ပြန်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အချစ်၊
ဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည့် အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ ဆရာမကို ဆက်ချင်နေတာ၊
ဒါချစ်ပိုင်ခွင့်ပါ။ လမင်း Lamin
ဇာတ်လမ်းထဲ မျောပါသွားပါတယ်။ နောက်ဆက်ရေးမယ့် အပိုင်းကိုလည်း စောင့်နေပါတယ် အစ်ကို။
မိန်းကလေးဘဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့် ကျင်ဘက်လူသားတဦးနဲ့ 
ရဲလင်းအောင်ရဲ့ ယောက်ျားမာနကိုထိသွားတာ- - -
အဆက်ဆိုတော့လည်းဆက်စေဗျားးးး
စတုထ္ထပိုင်းလေးကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ မကောင်းဘူး။ ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ငါ့ရဲ့မှတ်စု ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကြောင့် တကယ့်အဖြစ် အပျက်လေး အဖြစ် ခံစားမိသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ချစ်ခြင်းတရားကို ဘယ်လို နားလည်ရမယ် မသိတော့ဘူး။ လက်တွေ့ဆန်လွန်းတဲ့ ဒီိပိုစ့်လေးကို နှစ်သက်မိတာ အမှန်ပါပဲ။ ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါတယ်။
တကယ့်အဖြစ် လို့ ပဲ မှတ်ယူ လိုက်ပါတော့ မယ် ။
ရေးထားတာ များ နေပေမဲ့ဇာတ်ရှိန်က တက်နေ
ပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထု တွေ ပဲ ထွန်းကား နေတဲ့ နေရာ
မှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုး တွေ ဖြစ် တပ်လိမ့်မယ်လို့ 
ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် ကို စမ်းသပ် နေ
တယ်လို့သဘော ထားပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လုပ်
သင့်တာ တွေ ကို တစ်ခုခြင်း လုပ်သွားပါ လို့။
ကိုယ့်ဆရာရေ....အလုပ်မအားတဲ့ကြားက လာပြီးဖတ်ရတယ်။ အခန်းဆက်ဆိုပေမယ့် ကောင်းလွန်းလို့ပါ။ အရေးအသား၊ ဇာတ်အိမ်၊ စကားလုံးဘာမှကို ပြောစရာမရှိဘူး။ ဒီနေ့တော့ ဖတ်ပြီး မောသွားတယ်။ နောက်အခန်းတွေဆို မောပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရဦးမယ်ထင်တယ်။
အစကတည်းကစိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်နေတာ။ အပိုင်းဆက်တိုင်းက ကောင်းတာချည်းပဲ။ ဆက်ရန်ကိုမျှော်နေပါတယ်......
တည်ငြိမ်အေး - - - သို့ 
သစ္စာဖောက်တာ မှန်ရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ မသင့် ...
အစ်ကို ရေ အစအဆုံးဖတ်သွားပါတယ် တော်တော်ကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်က တကယ်.အဖြစ်အပျက်ထင်နေတာ ဘယ်လိုလဲအကို တော်တော်ကောင်းတယ်အကို နောက်အပိုင်းတွေမျော်နေပါတယ် ပြီးတော. ဘယ်လိုအခြေခံပြီးရေးထားတာလဲဆိုတာ သိပါရစေလားအကို ၁ နာရီတောင်ထိုးသွားတယ်ဂျ ...ဇမ်ဝင်နေတာ လေ.း))
အခန်း ၅ ရေးပြီးပြီလား လာကြည့်ပါတယ်
ဒီနေ့ ပထမပိုင်းကို Forward mail ကနေ ရလိုက်လို့ စိတ်ဝင်စားလို့ လာရှာတာ။ အပိုင်း(၄) အထိ ဖတ်သွားတယ်။ အပိုင်း (၅) ကိုလည်း စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။
ကိုဆိုဆီရေ။ အရင် တစ်ပိုင်းမှာ နည်းနည်း လွဲနေတာလေး တစ်ခု ထောက်ပြချင်တယ်။ တမျိုးတော့ မထင်ပါနဲ့။ စင်ကာပူမှာ ကုမ္ပဏီတွေ အားလုံး Corporation ဒါမှမဟုတ် Pte Ltd လို့ပဲ သုံးလေ့သုံးထ ရှိတယ်။ Co Ltd လို့ သုံးလေ့ မရှိပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းလေးကို ပိုပြီး အသက်ဝင်သွားအောင် လို့ပါ။
အပိုင်း(၄) ဖတ်ပြီး (၅) ကိုမျှော်နေပါတယ်..
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် အပိုင်း၅ ကို သင်္ကြန်အပြီးတင်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။